ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားကြောင့် ဘယ်တော့မှ ထပ်မငိုတော့ဖို့ ကတိစကားလေး ပေးလာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး – Askstyle
ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားကြောင့် ဘယ်တော့မှ ထပ်မငိုတော့ဖို့ ကတိစကားလေး ပေးလာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
တစ္နိုင္ငံလံုးက လူၾကီး၊ လူငယ္၊ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမမေရြး ၾကိဳက္နွစ္သက္ၾကတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာ ထက္ထက္မိုးဦးကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြမ်ားစြာကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလို သူမရဲ့ဘဝမွာ အနိမ့္အျမင့္၊ အတက္အက်ေပါင္းစံုနဲ့ ၾကံဳဆံုရတဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုနဲ့ ပက္သတ္ရင္ ကံေကာင္းျခင္းမရိွတဲ့ ထက္ထက္မိုးဦးက သူမရဲ့ဘဝမွာ ပရိသတ္ေတြေပးတဲ့ အင္အားေတြေၾကာင့္သာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္ထနိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာလည္း ထက္ထက္မိုးဦးက ပရိသတ္ေတြရဲ့ စကားေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္မငိုေတာ့ဖို့ ကတိစကားေလး ေပးလာခဲ့တာကို အခုလိုပဲ ေတြ့ရပါတယ္။
“ထက္မငိုေတာ့ဘူးေနာ္။ပရိသတ္ေတြက ထက္ကို မငိုပါနဲ႔ေတာ့တဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ၿပဳံးၿပဳံးေလးေနရမယ္ေနာ္တဲ့ ။ ထက္လဲ ဘယ္ငိုခ်င္ပါ့မလဲ ဒါေပမယ့္ ထက္ရဲ႕ ဘဝမွာ အခ်ိဳးအေကြ႕ေတြမ်ားလြန္းတယ္။ ငိုတခါ ရယ္တလွည့္နဲ႔ တခါတေလ ကိုယ့္ဘဝဇာတ္လမ္း ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ေနရသလိုပဲ။ ဒီအကယ္ဒမီ႐ုပ္ေလး ၂႐ုပ္ ျပန္ၾကည့္မိတိုင္း အကယ္ဒမီ ထက္ထက္မိုးဦး ရဲ႕ပရိသတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုၿပီးေတြးလိုက္ရင္ အားေတြရွိသြားေရာ။
အႏုပညာသက္တမ္းႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္လုံး ထက္ေဘးမွာ အၿမဲတမ္းရွိေနေပးခဲ့တာ အကယ္ဒမီ႐ုပ္ ၂႐ုပ္ နဲ႔ ထက္ဘာေတြပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ အခ်ိန္တိုင္းလက္ခံေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ပဲ။ထက္မွာ ဘာမွပိုင္ဆိုင္မႈေတြ မရွိေတာ့ရင္ေတာင္ ထက္ပရိတ္သတ္ေတြ ရွိေနတယ္ေလေနာ္…. ဒါကဘုရားေပးတဲ့ ဆုလာဘ္တခုေပါ့ ။ ထက္လည္း ခုထက္ ပိုႀကိဳးစားမယ္ေနာ္။ထက္ကိုလည္း ပိုခ်စ္ေပးၾကပါ။ထက္ေၾကာ္ျငာတာေတြကို လည္းအားေပးၾကပါလို႔ ေနာ္…..” ဆိုျပီး သူမရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။
တစ်နိုင်ငံလုံးက လူကြီး၊ လူငယ်၊ ယောကျာ်း၊ မိန်းမမရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလို သူမရဲ့ဘဝမှာ အနိမ့်အမြင့်၊ အတက်အကျပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံဆုံရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ ပက်သတ်ရင် ကံကောင်းခြင်းမရှိတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးက သူမရဲ့ဘဝမှာ ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ အင်အားတွေကြောင့်သာ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ထနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ထက်ထက်မိုးဦးက ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားကြောင့် ဘယ်တော့မှ ထပ်မငိုတော့ဖို့ ကတိစကားလေး ပေးလာခဲ့တာကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။
“ထက်မငိုတော့ဘူးနော်။ပရိသတ်တွေက ထက်ကို မငိုပါနဲ့တော့တဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ပြုံးပြုံးလေးနေရမယ်နော်တဲ့ ။ ထက်လဲ ဘယ်ငိုချင်ပါ့မလဲ ဒါပေမယ့် ထက်ရဲ့ ဘဝမှာ အချိုးအကွေ့တွေများလွန်းတယ်။ ငိုတခါ ရယ်တလှည့်နဲ့ တခါတလေ ကိုယ့်ဘဝဇာတ်လမ်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ဒီအကယ်ဒမီရုပ်လေး ၂ရုပ် ပြန်ကြည့်မိတိုင်း အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ပရိသတ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်ရင် အားတွေရှိသွားရော။
အနုပညာသက်တမ်းနှစ် ၃၀ ကျော်လုံး ထက်ဘေးမှာ အမြဲတမ်းရှိနေပေးခဲ့တာ အကယ်ဒမီရုပ် ၂ရုပ် နဲ့ ထက်ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အချိန်တိုင်းလက်ခံပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ပဲ။ထက်မှာ ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မရှိတော့ရင်တောင် ထက်ပရိတ်သတ်တွေ ရှိနေတယ်လေနော်…. ဒါကဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တခုပေါ့ ။ ထက်လည်း ခုထက် ပိုကြိုးစားမယ်နော်။ထက်ကိုလည်း ပိုချစ်ပေးကြပါ။ထက်ကြော်ငြာတာတွေကို လည်းအားပေးကြပါလို့ နော်…..” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ လက်ရှိမှာ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းချခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နေလျက်ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ထက်တစ်ယောက် ဘဝမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။